ATN: (၂)နှစ်ပြည့် အကြိုမှတ်တမ်း
အစ်ကို ခရီးသွားမယ့်ရက်က ညီမလေး မွေးနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်နေပါရောလား Happy Birthday လေးတော့ ၀င်နှုတ်ဆက်ပေးကြေးနော်
မိသားစုအရေး ဘ၀အရေးတွေနဲ့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ အစ်ကို ရေ.....
ခြေရာချန်မသွားဖြစ်ပေမယ့် ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်းမှန်မှန် ရောက်ပါတယ် ....
၂ နှစ်ပြည့် ပေမဲ့ ကဗျာတွေ အများကြီး ဆက်ဖတ်ခွင့်ရနေအုံးမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
မိသားစု အရေးကိစ္စတွေ အဆင်ပြေပါစေ
၂ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်စရာကဗျာလေး တပုဒ် ဖတ်ခွင့်ရပါရစေ လို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်
နှစ်နှစ်တိုင် စာရေးဖြစ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
အကို မအားတဲ့ ကြားက ၂ နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ ၊ ဂုဏ်ယူပါတယ်အကို...ဘာလိုလိုနဲ့ ညီမ ဘလော့ဂ်လဲ တလ ကြီးများတောင် ပြည့်တော့မယ်...။ အကိုတို့ မိသားစု အတူတကွ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေရှင်...။
အကို အောင်သာကြီး ... နှစ်နှစ်ပြည့် အကြို အထိမ်းအမှတ်နဲ့ နေ့တိုင်း လာလည် တဲ့ သူကို အထူးတလည် မုန့်ဝယ်ကျွေးရ မယ်နော်...း)
မအားလပ်တဲ့ ကြားကနေ ရေးဖြစ်နေတဲ့ အကို့ စာ တွေဖတ်ရ လို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
အကိုလည်း အဆင်ပြေပြေနဲ့ ဘလော့ဂင်း နိုင်ပါစေ....
လေးစားချစ်ခင်တဲ့ , mie nge
အဲ.. ပြောတော့.. ဘလော့ဂါ စာရင်း ကိုတော့..သူ မလုပ်တော့ပါဘူး.. တဲ့။
၂ နှစ်မှသည်.. နှစ် ၁၀၀ လို့ မပြောပါဘူး.. ရေးချင် သလောက် ဆက်ရေး..း)
နှစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတာလား ကျွန်မထင်တာ တော်တော်ကြာပြီ ထင်နေတယ်။ ဘလော့ဂ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်ကနေ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ ဘ၀ကို ပြန်ရပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
့Hit & Run မဟုတ်ပဲ
Publish & Run ဖြစ်နေတာကိုး
စထက်ပိုး၍ ဒါ့ထက်တိုး ရေးနိုင်ပါစေခင်ဗျာ
ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့ ဘလော့ဂါစာရင်း မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်.. အာကိုဂျီး
အောက်ဆုံးပိုဒ်က ဘာလဲ ..အင်.. :D
နှစ်နှစ်သားလေးမှသည် အဘိုးကြီး ဖြစ်တဲ့ထိ ကဗျာတွေ စာတွေနဲ့ ချွဲနိုင်ပါစေ.. အဲ.. ကဗျာတွေ ၊ စာတွေ ရေးနိုင်ပါစေ
from here to eternity :)
I'd like to request you to write something about Burmese life in the States whenever you have time, 'cos when I read your blog I can feel different aspect and the pain of the way of life in the States,
အကို စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာပြီး စာတွေ အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ။
ဘ၀ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှား အောင်မြင်စေရန်လဲ အသည်းကောင်းပါစေ။
အကိုချစ်တဲ့ မိသားစုလေး ဥမကွဲ သိုက်မပျက် အတူတကွ နှစ်ပေါင်းများစွာ ...
ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ ကို ATN
၂ နှစ်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စာတွေ ရေးနိုင်ပါစေ
အလွမ်းပြေ: Happy Blog2yrs Birthday !! ;) keep it up ! with all the best wishes ..
ဆက်လက် ဘလော့ဂင်း နိုင်ပါစေ ကိုအောင်သာငယ်ရေ။
အစ်ကိုရေ...စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း ပြည့်စုံစွာဖြင့် ၂ နှစ်သား ဘလော့လေးမှသည် သက်တော်ရှည် ဘလော့ဂ် ဘိုးဘိုးကြီး အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါစေ... :)
ဟုတ်ပါတယ် reader ကနေ စောင့်ဖတ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ.. ဒီပို့စ်တော့ မနေနိုင်လို့ ကော့မန့်ရေးခဲ့ပြီ.. ဆက်လည်းစောင့်ဖတ်နေပါတယ်..